Resky ny mpitsimpona akotry : fikatson’ny raharaham-pirenena | NewsMada
Resky ny mpitsimpona akotry : fikatson’ny raharaham-pirenena
Toy ny fiheverana ny tanjona arak’izay nandinihana azy dia natao izay hifandanjan’ny herin’ireo andry araky ny fahefana nahankina amin’izy ireo. Toko telo no mahamasaka hoy ny ohaboan-darzana. Tsy manalavitra an’izay isa izay ny fanambaran’ny mpandinika eran-tany ny fomba fanankinana ny fitantanana ny raharaham-pirenena rehefa manangana Repoblika izay tiana hijoro mahefa ny adidiny. Angamba torovaky ny fandehanana ila ny fanjakana nahankina nisesisesy tamin’ny Repoblika manao tongon-dovia noho ny tsy fisian’ny andry fahatelo. Na ara-tsoratra aza izay mbola hafa amin’ny fampiharana azy andavanandro dia ny “mpanatanteraka” sy ny “mpanao lalàna” no hany mifampizara ny fahefana. Ny mikasika ny fitsarana dia fandavana ny fijorony ho fahefana manokana eo ankilan’ireo roa hafa no fisehon’ny fanapahan-kevitra. Tratran’ny alok’izay fizarana mitongilana izay ny fanjakana. Noho ny tsy fipetrahan’ny fifandanjan-kery dia lasa mifanenjana ny andaniny sy ny ankilany. Tsy azo atao adina-tanalahy anefa izany ka izay osa maka loko mena ary izay maharesy no hany misalotra ny lokon’ny tany. Raharaham-pirenena moa izy ity ka ny loka mifehy dia ny an’ny rariny mifandanja. Izay fifandanjany izay dia ahafahana mikaroka ny marina sy mandio tsy misy fitongilanana.
Eto an-toerana anefa na ny fitenenana aza dia diso amin’ny fanadinoana ny fizarana telo ny fitondrana ao anatin’ny fifandanjana ny fahefana amin’ireo andrmi-panjakana telo samy manana ny andraikiny. Noho izay fanadinoana ny fahefan’ny mpanatanteraka irery no hany tonga ao an-tsaina na ao am-bava ihany raha fitondrana no anton-dresaka.
Inona moa ny loharano niantombohan’ny disadisa ifanenjanan’ny fahefan’ny mpanatanteraka sy ny vondron’ny mpitsara, fifanenjanana nitarika ny fikatson’ny fitsarana afa-tsy ilay raharaha mbola mitarozaka mikasika ny fanenjehan’ny fitsarana an-dRamatoa Claudine Razaimamonjy? Zatran’ny làlan-dririnina ny sasantsasany ao amin’ny fifehezana ka sendra ny petsapetsa toy no rendrika amin’ny fasika mandrevo sarotra ivoahana. Tsy nampoizina ny fijoron’ny mpitsara amin’ny fanakanana fanjakazakana toy ny mahazatra, ny fitsabatsabahana ao anatin’ny andraikitra izay iadidiany.
Nivoitra noho izay ny aretina any ifotony dia ny andringan’ny fanjakana mitsingilaila ambonina toko na andry roa fotsiny. Ny famerenana ny toko fahatelo no hany fanefitra ahafahana manarina ny rafim-panjakana.